ထန်တလန်မြို့နယ်ဆိုင်ရာ Chin Ceasefire Monitoring Team ရုံး ဖွင့်လှစ် - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»ထန်တလန်မြို့နယ်ဆိုင်ရာ Chin Ceasefire Monitoring Team ရုံး ဖွင့်လှစ်
အစိုးရနှင့် ချင်းလူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးတို့၏ နှစ်ဖက် အပစ်အခပ်ရပ်စဲပြီး ပဏာမ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် မှုလုပ်ငန်း စဉ်အတွင်း ထန်တလန် မြို့နယ် ဆိုင်ရာ ချင်းအပစ်အခပ်ရပ်စဲရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့( Chin Ceasefire Monitoring Team) ရုံးဖွင့်လှစ်ပွဲကို ဇွန် ၁၄ ရက်နေ့က ထန်တလန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ထန်တလန်မြို့နယ်ဆိုင်ရာ အဆိုပါ CCMT ရုံးကို ထန်တလန်မြို့ပေါ် LungTiaL ရပ်ကွက်တွင်ဖွင့်လှစ်ကြပြီး ဖွင့်လှစ်ပွဲ သို့ ချင်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ CCMT ဥက္ကဌ Rev. Dr. Lal Uk, Rev. Tluang Ceu ( Secretary), ချင်း အမျိုးသား တပ်ဦး၊ ထန်တလန်မြို့ ဆက်ဆံရေးရုံးအရာရှိ Pu HC. RalHnin နှင့် မတူပီမြို့ ဆက်ဆံရေးရုံးအရာရှိ Pu ThangYen , မြို့ နယ်ရဲမှူးအပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိများ၊ မြို့မိမြို့ဖ တို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ဖွင့်ပွဲတွင် ချင်းပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ CCMT ဥက္ကဌ Rev. Dr. Lal Uk, က၄င်း၊ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ Rev. Tluang Ceu တို့က၄င်း ရုံးဖွင့်ရခြင်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်း မှုပြု လုပ်ကြသည်ဟု ထန်တလန်မြို့ ဆက်ဆံရေးရုံးမှ ရုံးအုပ်ကြီး ဆလိုင်း ဂျိုးဇက်က ပြောသည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအကြား သဘောတူညီချက်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး၊ ထာဝရ တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရန် သဘော တူထား သည့် အချက်များအား တဖက်နှင့်တဖက် တည်ကြည်ရိုးသားစွာဖြင့် လိုက်နာခြင်းရှိမရှိကို ကြားနေ စောင့်ကြည့် လေ့လာမည့် ကော်မရှင် “အပစ်အ ခတ် ရပ်စဲခြင်း လေးစား လိုက်နာမှု စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မရှင်” ကို တမြို့နယ်လျှင်တဦးစီနှုန်းဖြင့် မြို့မိ/မြို့ဖ စုစုပေါင်း (၉) ဦး၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း (၉) ဦး၊ လူငယ် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၉) ဦး၊ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားလျှယ် စုစုပေါင်း (၉) ဦး နှင့် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် (၉) ဦးပါဝင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၄၅) ဦးကို ချင်းငြိမ်းချမ်း ရေးကော်မရှင် က ဖွဲ့စည်းပေးရန် သဘောတူသည် ဟု ပါရှိသည်။
ထန်တလန်မြို့နယ်ဆိုင်ရာ CCMT ကို Pu Lawm Bik က ဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဒေါက်တာ Hmuh Thang, Pu Siang Zel, Pu Thla Hmung, Pu Van Bawi Thang တို့ပါဝင်ကြသည်။
မြို့နယ်ဆိုင်ရာ Chin Ceasefire Monitoring Team ကို မတူပီမြို့နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်၊ ဟားခါးမြို့နယ်များ တွင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်သော်လည်း ရုံးကို မူ မဖွင့် လှစ်နိုင် ကြသေးချေ။